Ungasiguqula kanjani isihleli sombhalo esizenzakalelayo ku-terminal | Kusuka kuLinux
Ungasiguqula kanjani isihleli sombhalo esizenzakalelayo esigungwini
Njengoba cishe yonke into eseLinux kunemibono ehlukaniswe njalo, abahleli bombhalo wokugcina abekho. Kukhona labo abakhetha vi, vim, abanye mcedit nabanye (okuncane kakhulu engikucabangayo) abakhetha nano.
Kwenzekile kuwe ukuthi uhlelo lokusebenza (uma ulifaka noma njll) likuvulela ifayela lombhalo ukuze ulihlele, bese livulwa ngesihleli sombhalo ESINGAYONA intandokazi yakho?
Isibonelo, abasebenzisi abathanda i-vim bavule lelo fayela nge-nano ... lokhu kusobala ukuthi akubonisi ukumamatheka ebusweni babo 😀
Ukuze uhlelo lusebenzise njalo umhleli wombhalo wokugcina owufunayo, kufanele ungeze okulandelayo ku-.bashrc yakho:
Ukuyifaka ku-.bashrc kungaba:
Futhi i-voila, inkinga ixazululiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungasiguqula kanjani isihleli sombhalo esizenzakalelayo esigungwini
UNano ngu nano .. Kimi umhleli omuhle kunabo bonke is
i-nano ingeyalabo abangazi ukusebenzisa i-vim ……
phakathi kwalokho ngizifaka ngokwami ​​i-xD hahahahaha
Inkinga yokusebenzisa i-vim / vi / gvim (windows) iyinhlanganisela esindayo yezinkinobho nokukwazi ukubeka ama-plugins ukuyenza ibe namandla ngokwengeziwe haha ​​kodwa kimi ngisebenzisa i-gvim yamawindi ngoba ngiyazi inhlanganisela ethile futhi nami ngicabanga ukuthi ingumhleli onamandla kunabo bonke ngombono wami
Hahahaha njengawe nje
Futhi ngikwenze isikhashana esedlule esithangamini se-vim
Ngikholwe uma ufunda ukusebenzisa noma yikuphi kwalokhu ozokusho Ngingaphila kanjani ngisebenzisa i-nano? hahahaha 😀 Sanibonani
Kulungile, i-nano ingu-nano, futhi ingumhleli omuhle kakhulu wokunambitha kwami, kepha-ke, kulabo bethu Abaphathi bohlelo Lokusebenza cishe kuyisibopho sokufunda ukusetshenziswa kwe-vi, ngoba kungumhleli ozothola kunoma yikuphi inguqulo yokusatshalaliswa kwe-UNIX noma i-GNU / Linux.
Okokufundisa kuhle kakhulu futhi kuyasiza, kuyaziswa 😀
Kungaba kuhle futhi nokushintsha ukuvumelanisa komyalo `we-editor` ukwenza ushintsho lube lomhlaba jikelele. Noma okunye, okungenani, yenza okufanayo ngomsebenzisi wezimpande.
Yebo, esimweni sami sokuqala engihlangane naye bekuyi-vim futhi kufanele ngivume ukuthi ngaphula amakhibhodi amaningi ngoba bengingayazi inhlanganisela yokhiye kahle, kepha manje isihleli esizenzakalelayo, empeleni i-nano ibonakala inzima, okungenani kimi . Ngisho nokusatshalaliswa okuletha i-nano ngokuzenzakalela, ngiyishintsha ibe yi-vim.
Kuhle kakhulu. Manje uma ngizosebenzisa ama-emacs kukhonsoli.
Ku-Debian nakwezinye izinto ongazenza:
# izibuyekezo-ezinye izindlela -config editor
Futhi lapho uphonsa amathuba bese ukhetha 😉
Angazi ukuthi kungani kodwa selokhu ngaqala iLinux (emuva ngo-2002) bengihlala ngikhetha i-mcedit futhi yilapho engangihlala khona. Ihlanganiswe ne-mc (ngokusobala), ine-interface elula esebenzisa okhiye bokusebenza (okuku-vi okubonakala sengathi ihlobisa), i-syntax egqamisa cishe yonke into, imibala engisiza ukubonwa (ingemuva elimnyama alingiqinisekisi ngalutho ) phakathi kwezinye izinto. Ngahlala lapho, futhi ngijabule.
Ideskithophu Engcono Kakhulu ye-Linuxero: Mashi 2014
Ukuthuthukisa Izicelo ze-Ubuntu [QML]